ओमकार टाइम्स प्रधानमन्त्री ओलीको उपचार नेपालमा सम्भव नभएको हो ? – OMKARTIMES
प्रधानमन्त्री ओलीको उपचार नेपालमा सम्भव नभएको हो ?
सिंगापुरबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्री ओली आफैंले ‘मेरो स्वास्थ्य ठिक छ’ भन्ने प्रतिक्रिया बाहेक स्वास्थ्यको बारेमा अहिलेसम्म कुनै पनि जानकारी आएको छैन । साउन १८ गते उपचारको लागि गएका प्रधानमन्त्री साउन २७ गते फर्केका थिए । फेरि उपचारको लागि जाने भन्ने कुरा आएपछि आज प्रतिनिधसभाको बैठकमा सांसदले के प्रधानमन्त्रीको उपचार नेपालमा सम्भव नभएको हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको ०६४ साल साउन १५ गते किड्नी ट्रान्सप्लान्ट गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई बुहारी अञ्जनाले किड्नी दिएकी थिइन् । रातोपाटि बाट साभार